Shenzhen International Art ngosi 2021
International Stationery & Office Products Fair will be held in Tokyo Big Sight, Koto, Japan
At Ebe a na-eme ma nwee ebe ngosi Shenzhen
Ụlọ Ọrụ Weebụ http://www.szartex.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=7
Categories: Ejiji & Mma, Arts & Crafts
SIAF ga-arapara n'echiche ya "Art For Home" na usoro na-ewepụta nka, na-eme ka ogo dị mma ma na ndị ngosi na ọrụ ngosi. Ihe ngosi a ga - ekewa n'ime uzo ano: Galleries, Art Crossover, Art Art na Exhibition Exhibition. Na Galleri, nka nka na nka ochie ga abu isi abuo, chikota veranda nke ulo na nke ofesi, nke gosiputara ihe osise di iche-iche di iche-iche n’uwa dum na uru di elu. Na Art Crossover, Ọha na Ọha na Ngosipụta Okwu, a ga-akpọ ndị nlekọta ka ha kpọọ ha na ngalaba nke ọ bụla, na -emepụta echiche nnwere onwe na nke tozuru oke, mana etemeete ma mee ka ọnọdụ niile dị mma.
Ihe omumu nke ndi na ere ahia, oku nke ndi na achikota, na nkwado nke ndi ahia gha abu isi ihe. SIAF guzobere ọgbakọ mkpokọta Asia na 2015 na 2018, ndị otu anyị toro na 100 + ndị mmadụ na ndị na-eso 500 +. Site na ndu nke ndị nkwado abụọ, Shenzhen Enterprise Confederation, na Shenzhen Cultural and Creative Industry Association, e nwere ihe karịrị 10 puku ndị ọchụnta ego na ndị omenaala na-esonye SIAF kwa afọ. Kedu ihe ọzọ, kọmitii SIAF emeela atụmatụ ihe omume BAC (Be A Collector) iri kwa afọ iji jeere ndị otu ACC, ndị na-akwado ya, na ndị na-egwu nka. Site na mmekorita ya na mgbasa ozi nka na mgbasa ozi ọha na eze, anyị na-enwe oke ịnụ ọkụ n'obi nke na-agaghị agwụ agwụ.
Dị ka ndị mbụ ọkachamara art ngosi na Shenzhen, Shenzhen mba art ngosi n'ụzọ zuru ezu integrates obodo art oriri ahịa na Shenzhen, na-ewe "art · home" dị ka isiokwu, art oriri dị ka ndabere na agụmakwụkwọ nduzi dị ka elu, mgbe niile optimizes na mma na. àgwà nke ngosi, ma na-apụ nke e ji mara ụzọ nke "ìhè, okomoko, na mba nka ngosi". Ọtụtụ narị nke elu-edu veranda na art oru si Chile China, Hong Kong, Macao na Taiwan, na United States, France , Italytali, Belgium, Denmark, Czech Republic, Russia, Japan, na South Korea sonyere na ngosi ihe ngosi gara aga, na ntụgharị ebumnuche ahụ ruru ihe ruru nde yuan 100.
Ga-aga n'ihu na-ekpuputa ngosipụta nka nka mba ofesi, nka na ndụ, nka, na nka na obodo obibi na mmekọrịta dịgasị iche, mmekọrịta dị iche iche dị n'etiti ihe ngosi nka na amaala ama na ụlọ na mba ofesi n'ime akwụkwọ a, mmepe ụdị nka ogologo ume ohuru ohuru, ma gbasaa nkà na ibi ndụ n'ụdị njikọ njikọ njikọta, na ọrụ enyemaka ọha na eze maka obodo na-esetịpụ ụkpụrụ mara mma, na -emepụta ihe ngosi nka kachasị mma na obodo.
Site n'iwebata na mmejuputa nke echiche nke "Guangdong-hong Kong-Macau ukwuu n'ọnụ mmiri mpaghara", Shenzhen aghọwo otu n'ime ihe ndị kasị mkpa akụ na ụba n'ógbè n'ógbè ndị dị n'ebe ndịda China, chụpụrụ site na ya pụrụ iche ala na ọnọdụ na omenala ikuku na-ejikọ Hong Kong. na Macao ma na-enwu na ala. Nchọpụta ihe eji eme nka, nnabata nke ndị na-achịkọta ihe, yana mmekọrịta azụmahịa ga-abụ ọrụ a ga-elekwasị anya n'afọ niile. Site na nkwado nke ọgbakọ nchịkọta Asia (ACC), Shenzhen nka nka mba ụwa ga-aga n'ihu na-akpọ ndị nchịkọta kacha elu n'ike na ịdị mma maka ngosi nka. Nchikota nke ike na ihe ndi ozo bu ihe omuma nke Shenzhen art ngosi. Site n'inye egwuregwu zuru oke na uru nke Shenzhen enterprise gọọmenti na Shenzhen omenala na okike ụlọ ọrụ mkpakọrịta, ọzọ elu-ọgwụgwụ oru buu igba n'ulo ga-ahazi maka art ngosi. Kọmitii na-ahazi ga-eme ọtụtụ BBS B-art art, nkuzi nkuzi, nchịkọta arịa, ekele nka, njegharị nka, na ọrụ ndị ọzọ na Shenzhen na obodo ndị gbara ya gburugburu, na-atọ ntọala siri ike maka veranda na ụlọ ọrụ nka iji hazie ma ka mma ndị na-azụ ahịa. Jiri ezi obi na-atụ anya isoro gị kerịta mmemme nka ahụ!
Ihe ngosi: veranda nke ụlọ na nke mba ọzọ, ụlọ ọrụ nka, ego nka na ụlọ ọrụ nka ndị ọzọ.
Udi nke ihe ngosi: ulo na ndi ozo ma obu ndi ozo: ihe osise, ihe oyiyi, ihe ndi ozo, vidiyo, ntinye na ihe ndi ozo.
Kris 2 afọ
Ihe osise & Ime ụlọ
aha m bụ Kris si Poland
Aga m esonye Shenzhen Art Fair.
Enwere m veranda nka na obodo m ma achorom ime ka ndi China mara ihe.
Enwere m mmasị maka ihe niile enwere ike iji maka imewe ime ụlọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị isoro m rụọ ọrụ biko kpọtụrụ m [email protected] na.pl
Ihe osise & imewe ụlọ
Dilipkumar kwuru Afọ 2 afọ 3
Ihe osise maka ire ere
Abụ m DilipKumar si India, na-achọ isonye ma gosipụta eserese agba m mmiri gbara larịị 6 ụkwụ x 5 ụkwụ n'ogologo. Nke bu ihe puru iche na odida obodo India nke edobere. Na-acho ohere iji gosiputa amam ihe m na nka m n’ebe okike.
Achọ nti nzaghachi ekele
Ekwentị mkpanaaka + 91 9840811871